Xoghayaha Warfaafiinta ee Xisbiga qurba-joogta Soomaaliya oo soo saaray……
Thursday June 06, 2019 - 06:40:03 in Wararka by Mogadishu Times
Somali Diaspora Party Taariikh ahaan siyaasadda ku – dhaqan-qabiilka ee soomaliya waxay soo jirtay ka hor inta aynan hanan xurnimadeeda, waagana xal looma helin , Laakiin ,Xisbiga siyaasadeed oo la baxay 'Somali Dispora Party' ayaa b
Somali Diaspora Party Taariikh ahaan siyaasadda ku – dhaqan-qabiilka ee soomaliya waxay soo jirtay ka hor inta aynan hanan xurnimadeeda, waagana xal looma helin , Laakiin ,Xisbiga siyaasadeed oo la baxay 'Somali Dispora Party' ayaa baadi goob ugu jira sidii looga bixi lahaa siyaasadan qaabka daran ee qabiil ku dhisan ee maamulka dalka ku soo koobtay Muqdisho iyo xaruunta Madaxtooyada oo aad moodo in uu ku yaal ceel biyo macaan oo ay qoosaaradu biyo doonka ah iyo awrto ku loolanto
Xisbiga Qurbajoogta Soomaaliyeed waa xisbi xaldoon ah oo ka damqanayo dhibaatada qoysaska soomaaliyeed ee ku nool dal iyo dibadba. Waa xisbiga Xaldoon ah oo diidan xilka Inta Siyaadda ay ku dhisan tahay qabiil.iyo in aan isla doono qoysaska qurba-joogta Soomaaliyeed qaabkii ay ula jaan qaadi lahaayeen wadamada aan la nool nahay.
Xisbiga waxay isla shaqeeyaan aqoonyahano soomaaliyeed oo xaldoon ,ah oo la magac baxay ; guddiga siyaasadda qurba-joogta soomaaliyeed waxayna muddo lex sanno ah ka badan baadi goobi ugu jireen sidii dadka iyo dalkaba loogu maamuli lahaa Federaalka Ku Haboon dhaqanka iyo hiddha Soomaaliya
Xisbigan waxuu si gaar ah ugu adeegayaan shacabka ku 18ka gobol ee dalka Soomaaliya uu ka kooban yahay, gaar ahaan, waxuuna fursadaha intooda badan u siinayaa dhalinta Soomaaliyeed ee dhashay xilligii dagaalada sookeeye. Iyo kuwii waqtigaas ahaa caruurta ahaa. Dhallintaas, meel weliba oo ay joogaan, waxaan ka codsanayaa inay ka tala-bixiyaan qaabkii qabiilka looga samato bixin lahaa siyaasada Federaalka ee Soomaalia.
The Nine Zone of Somali Regional
Reforming Somali Economic Policy
Name of Name of the 18 official Regions
01 Zone 1
Red Sea – Travel and tourism
Urban area and Berbera sea port Red Sea
Lives stock and animal husbandry
02 Zone 2
Landscape (Travel and tourism)
Landscape Travel & Tourism –Red Sea
03 Zone 3
Bosaso Port, Puntland
Zone 4 Galgaduud
Livestock and maritime resources
05 Zone 5
Hiiraan Industries, Livestock Agriculture & Maritime
Livestock & Agriculture and commerce
Zone 6 Bay
Bakool Livestock & Agriculture – Jubba River
Livesrock & Agriculture – Jubba River
Livestock & Agriculture – Jubba River
Sh/hoose Coastal Regions (Indian Ocean) Travel & Tourism and industries (Kismaio Port)
Y/shiid Shangani Wadajir Shibis
H/weyne Hodan A/aziz
H/Jajab Dayniile K/raan
Waaberi Dh/Kenley Huriwaa
Sh/gani Wadajir Shibis
The name of official Districts for Somali people No of Districts Name of Councillors & MPs
Gobolka Magacyada Degmooyinka rasmiga ah ee
01 Awdal Borama Lughaya . Saylac Baki 04 28 16 12
02 W/galbeed Hargeisa Gabiley Salahlay Berbera 04 28 16 12
03 Togdheere Burao Buhodle Odwayne Sheikh
04 28 16 12
04 Sanaag Laasqoray Erigaabo Badhan
03 21 12 09
05 Sool Laascaanood Caynaba Taleex
06 Bari Bosaso Qandala Qardho Caluula Iskushuban
05 35 20 15
07 Nugaal Garoowe Eyl
02 14 08 06
08 Mudug G/kacyo Galdogob Hobyo H/dhere
Jariiban 05 35 20 15
09 G/Gaduud Caabudwaq Cadaado Ceelbuur Ceeldheer
Dhusa Mareb 05 35 20 15
10 Hiiraan B/weyne Buuloburde Jalalaqsi Matabaan
11 Sh/Dhexe A/ Yabaal Balcad Cadale Jowhar Warsheikh Mahadaay
06 42 24 18
12 Benaadir Magacayada 16 Degmo ee G/ Benadir
Fadlan Fiiri shaxda qeybeeda hoose- 16 112 64 48
13 Sh/Hoose Afgoi Baraawe Marka Q/yoleey W/weyn
07 49 28 21
14 Bay Xuddur Tiyegloow Waajid Yeed
15 Bakool Baidoa Buurhakaba Diinsoor Qasahdhere 04 28 16 12
16 Gedo Baardheere B/ Hawo Doolow Garbahaarreey Luuq
17 J/dhexe Bu’aale Jilib Sakow
18 J/Hoose Afmadow Badhaadhe Jamaame Kismaio 04 28 16 12
88 616 352 264
Benadir Districts: Abdiaziz Bondhere Daynile Dharkenley H/Jajab Hodan H/Weyne H/Wadag
Huriwaa Kaaraan Shibis Shangaani Waabari Wadaji Wardhiigley Yaaqshiid
FG Stands Federal Government.
Dawladda Federaalka Soomaliya
Waxaan halkan ugu Mahadcelinaya Madaxdii hogaamineysay Dawladahii burburka ka danbeeye oo idil waxay muujiyeyn dadaal aad u mug weyn. Sida magaca dawladda soomaaliya ka muuqda, Dawladda Soomaaliya waa Dawlad Federaal ah, balse, waxay u dhaqmayaan sidii Dawlad dhexe oo kale, Taasina, waxaa ku caddeyn karo Dastuurka ay isticmaalayaan oo ah dastuur loogu talagalay dawlad dhexe (Central Goverment). Tusaale ahaan;Bangiga Dhexe (Central Bank), waxaan maqli lahayn haddii la fahansanyahay Siyaasada federaalka: Somali Federal Bank. Somali Federal University, halka Maanta ay Jaamacda Ummada Somaaliyeed.
Qaabka ay u wada qeybsanayaan waxaan ka arki kartaa darasadaan.
Saddexda instittution ee dawladda federaalka ka kooban tahay; sida: Fulinta, Sharci deginta iyo Garsoorka. Waxay ku haboon yihiin in loo kala qeybiyo Caasimada dalka oo idil, maxa yeelay, dawladda Federaalka waa dawladda (Decentrlised ah).
Dawladda Decentraal ah, waxay leedahay xukun salkiisu balaaran yahay(FLAT CHART), waxay bil cagsi isku yihiin qaabka dawladda Dhexe, ee Aalaaba Madaxda Soomaaliyeed ku caan baxeyn. Sida magaabista Taliyaasha Ciidamada, Guddoomiyaasha Goboladakeeda ka soo aasaasmaaWaa maxay decentrlised doonaa saddex caasimada saddexan gobol
Federaalka Ku Haboon Soomaaliya
Federaalka ku haboon Soomaaliya waa in uu yeeshaa Dastuur qeexayo Federaalka ku haboon soomaaliya uu yeelan doono Xildhibaano ka kala socda Gobolada iyo Degmooyinka dalka.
Dawladaha federaalka waa dawlad shirka ah , sideedaba uma shaqeyn karto sida dawlad dhexe oo kale, laakiin dawladda dhexe waxaa la dhihi laha dawladdi kacaanka oo kale, dawladda federaalka way ku adag tahay in ay shacabka gaarsiin karto adeegii guud ee looga baahnaa. Teeda kale, Dawladda federaalku ku haboon waa tan dhaqaalahu kaga yimaadaa dhinaca dawladaha hoose ee degmooyinka dalka,
Dawlad goboleedyada waxay aaminsanyihiin in dawladda federaalka in ay leedahay miisaaniyada kabi karto kharashka adeega guud ee dawlad goboleedyada.
Dhaqaale ahaan, Somaliya waa dal hodan ah ee ku filan shacabkiisa ee tiradiisu lagu qiyaaso …………….. balse waxuu u baahan hogaamin iyo maareyn. Xanbaarsan khibrad iyo waayo aragnimo .Daraasadan waa daraasad muhiim ah oo malaha waxibedeli karta siyaasadda qabiilka ku dhisan ee Soomaaliya. Dalka soomaaliyeed waa dal aan ahayn faqri i lagumana tilmaami karo.tusaal ahaan, bal meel noo dhig kheyraadka gobolada koofureed ee kala duwan, xitaa gobolada waqooyi iyo kuwa bariga ku beegan waxay leeyihiin kheyraad ka badan kuwa koofurta lagu tilmaamo sida xoolaha, kaluumiku filan sida gobo ganacsi deked bosaso, laasqoray, haafuun, ganacsi kala duwan, xabag kala duwan ,beeyo, fooxa cawda iyo kalluun aad u fara badan iwm.
Gobolada dhexe ma yareystaan waxay leeyihiin xool aad u fara badan siiba ariga. Sidoo kale gobolada sool iyo sanaag, oo ah gobolo ku haboon ganacsiga dalxiiska iyo dhirta udgoonka badan ee shimbirahu soo raacaan iyo ubaxa kala nooc ah oo ku haboon suuq gaynta caalamka.
Siyaasada Sharci dejinta iyo Awood qeybsiga Federaalka
Gudoonka Golaha Siyaasadda Federaalka waxuu ka koobna yahay 19 ruux oo kala ah:- Madaxweynaha Dawladda Federaalka, iyo Guddoomiyaasha 18 Gobol ee Dalka Soomalia. Awooda Qeybsiga siyaasadda federaalku waxay dhex jiiftaa degmooyinka iyo gobolada dalka, balse, waxay u baahantahay in laysa meel digo tirada rasmiga ah degmooyinka dalku leeyahay. Muhiimada sharci dejintaa waxay ku saleysan tahay baahida Adeega Guud (public Service delivery) ee Degmooyinkooda Rasmiga ah ee Dalka Soomaaliya.
Awooda qeybsiga siyaasada federaalka kama timaado xaga sare ee madaxwaynaha iyo madaxtooyada.balse Awooda waxay ka imaaneysaa guddoomiyaasha degmooyinka iyagoo la tashanayo shacabka soomaaliyeed ee ku nool tuulooyinka hoos yimaada degmadaas. Haddaba si loo wada wadaago dhaqaalaha, siyaasada, awooda iyo talada federaalka waa in la helaa himilooyinka federaalka sida:-
1. in ganacsatada soomaliyeed lagala tashado xukunka dalka, maadama ganacsiga uusan laheyn qabiil.
2. In dastuurka soomaliyeed laga cadeeyo awoodaha madaxweynaha dawladda federaalka.
3. in manhajka waxbarasho ee gobol weliba lagu saleeyo manaafacaadka gobolka
4. in ciidanka federaalka ee soomaaliyeed laga soo xulo gobolada dalka.
5. in lagu soo koobo tirada wasiira-dawlayaasha 18, laguna salayo tirada gobolada dalka,
6. in degmo laga helo dhakhli ay dawladda federaalka ku shaqeyso, ilayn xaq maaha in Gobolka oo keliya laga helo 85%
7. in ciidanka Booliska soomaliyeed loo kala degmooyinka oo dalka ka kooban yahay
8. in jagadii raisal wasaaraha lagu bedelo madaxweyne ku xigeen.
9. In xildhibaanada soomaaliyeed ay masalaan shacabka ku nool degmooyinka ay ka soo jeedaan warbixina ka keenaan.
10. in gobol weliba loogu yabooho wasaarad ka tarjumi karta khayraadka uu leeyahay Gobolku iyo baahida gobolka leeyahay, tusaale ahaan:-
2.8 Dhaqaalaha Federaalka
Dhaqaalaha dawladda federaalka waa in uu ka yimaanayaa gobolada dalka oo dhan. gobol weliba adeegiisa guud isagaa ka masuul ah. hadaba kol haddi uu Eebe nagu maneystay kheyraadka kala duwan , maxaa ku jaban haddii uu gobol weliba wasiiradooda si toos ah ula xisaaabtamo Dawlada Federalka. Wasiirarada gobolada ka kala masuul iyo gudoomiyaasha gobalka waxay huwan yihiin magaca shacabka ku nool gobolka . Tusaale ahaan[ dawlaha horumari Gobol xukuma gobol kale ma jiro. Gobol weliba isagaa is xukuma (Regional Autonomy), Gobol weliba dhaqaalahiis isagaa maareyntiisa iyo maamulkiisa ka masuul ah.
2. Dhakhliga Dawladda Federaalka
Dhakhliga dawladda Federaalka wuxuu ka imaanayaa dhinaca dawlaha hoose ee degmoooyinka, degmo welibana waa in ay leedayahay Guddoomiye degmada iyo duqa magaalda u gaar ah, iyadoo guddoomiye degmo weliba si toos ah ula shaqeynayo madaxda tuulooyinka iyo guddoomiyaha gobolka.
Lamaaneynta wasiiru dawlayaasha iyo Madaxda is- maamul goboleedka
Guddoomiyaha Gobalku (The Governor) wuxuu si toos ah ula shaqaynayaa wasiiru-dawlaha lagu mataaneeyey gobalkooda, Wasaaradda gobolka lagu mataaneenayo waxay ka abuureysaa fursado shaqo caasimadaha Gobolda dalka. Tani waxay caddeynaysaa in dawladda federaalka ee mustaqbalka fog ay hanteyn nidaamka federaal oo ku haboon dalkooda hooyo, iyo Federaal ka turjumaya baahida adeega guud ee gobalka.
Wasiiro dawlad welba oo ku mataaneywaa Gobolka waxuu Dawladda Federaalka wakiil ugu yahay dhinaca siyaasada federaalka.waxaana looga fadhiyaa inuu wasiirku la yimaado siyaasad cad oo ku dhisan talo-wadaag iyo hanti-wadaag fulin kara adeeg guud oo la gaarsiiyo gobolada dalka oo idil. Kasoo u horseedayo jiilka cusub nolol ku filan ; isla markaana waa in ay la yimaadaan dhaqaale baahsan oo u adeegayo shacabka ku nool tuulooyinka iyo degmooyinka Gobolkaas. Gobol weliba isagaa is xukuma, waxuuna masuul ka yahay kheyraadkiisa ,dhaqaalaha iyo
Siyaasadiisa (Regional Autonomy)>
Si loo helo canshuurta nagu waajibtay waxaa gobol weliba masuul looga dhigo doonaa wasiir ama wasiiru, iyadoo lagu lamaaneynayaa, mid ka mid Gobolada dalka. waxaa lays waafajinayaa mihnadaha wasaaradda iyo kheyraadka Gobolka sida; wasiirka warshadaha fadhigiisu waa caasiimada gobolka shabeelaha dhexe ee Jowhar. Sidoo kale , wasiirka dalxiiska oo ku haboon , caasimada ceerigaabo ee gobolka sanaa.,
Fulinta Siyaasadda Adeega Guud (Public Service Delivery).
Qorshaha dawlada federaalka Soomaaliya waa:-
⦁ In la abuuro qorshe lagu mataaneenayo gobolada iyo wasaaradaha dalka Soomaaliya
⦁ In magaca raiisal wasaaraha loo rogo madaxweyne ku xigeen dalka
⦁ In dawladda federaalku aysan ahayn dawlad dhexe balse xaqiidii ay tahay dawlad federaal ah
⦁ In awoodu dawladda federalka ay ka timaado hoos wajahdana dhanka sare (Bottom to top) .
⦁ In degmo weliba laga sameeyo tartan dhaqan dhaqaale oo abuura is-maamul goboleed (Regional Autonomy)
Haddey qorshanhan laga dhabeeyo dawladda federalka waxay dib u soo celin doontaa qiimaha iyo qaayaha u leeyahay macnaha dowlada soomaliya ee haatan federaalka ah, balse marka hore waa in degmo weliba ay isku tashato oo ay la timado hab- raac ku salaysan baahideeda iyo baahida qobolka ay ka tursan tahay .
Shaxda Doorashada Xildhibaanada Dawladda Hoose ee Heer Degmo /Deegaan
The name of official Districts in Somalia Tr.Deg Tirada Xildhibaanada
Somaliya D/ Hoose
03 Togdheere Burao Buuhoodle Oodwayne Sheikh
04 Sanaag Laasqoray Ceerigaabo Badhan
08 Mudug Gaalkacyo Galdogob Hobyo Harardheere
Sablaale Kurtunwaarey 07 49 28 21
14 Bay Xuddur Tiyeegloow Waajid Yeed
15 Bakool Baidoa Buurhakaba Diinsoor Qasahdhere 04
17 J/hoose Bu’aale Jilib Sakow
18 J/Hoose Afmadow Badhaadhe Jamaame Kismaio 04
Benadir Districts: Abdiaziz Bondhere Daynile Dharkenley H/J8ajab Hodan H/Weyne H/Wadag
The Planning Hierarchy of Somali Federal Institutions
Politically, Somali should be made up of 18 regional states, and hopefully each region will reward one ministry of state (MOS) to deliver public service sysytem
The President is the head of the federal Government and he remains the head of State,
President role is to work with the Attorney General and general audit
Governors of the 18 Regions comprise of Somalia, they work straight to the president
The name of Prime Minister will be change into vice president, VP roles and responsibilities the cabinet will comprise of 18 Sectary of States(SOS)
Federal government should be decentralized government, instead of central government
(Member of Somali Parliamentarian comprise of (Senators & Councilor’s)
Councilors represent the 89 districts comprised of Somali federal government. Each district required 3 councilors, one should be female.
Senator are representing their regions.
Each region required 7 Senatorsx18=(7×18) = 126
2.0 MIISAANIYADA DAWLADDA FEDERAALKA SOOMAALIYA
Degmo weliba waxaa laga rabaa in ay la shaqayso gobolkeeda , islamarkaana, ay la xisaabtanto gobolkeeda, saa hay’adii fulinta ayaa gobol weliba ka hawl galeyso. Agaasimaha Guud ee wasaaradda iyo Gudddoomiyaha Gobolka waxay isla diyaarinaayo sadeexdii biloodba waxay isla diyaarinayaan warbixin la xiriirta hawl qabadka guud ee wasaarada iyo Gobolka iyo kheyraadkeeda laga helo Gobolka.
Tusaale ahaan:- gobolka Galgaduud waxaa laga xukumaa Degmooyinka ; waa bottom-up line communication system oo ah in maamulku ka bilowdo salka hoose.
Si shacabka soomaaliyeed u helo federaal aan dhalanteed ahayn.Wasaaradda Maaliyada iyo lacagta waxay diyaarinaysaa baahida adeega guud ee looga baahan yahay Degmooyinka dalka, sida:- manhajka waxbarashada , tirada dugsiyadda, tirada goobaha caafimaadka , MCH yada, ceelasha, waraabka iyo waraha, iyo wax alla waxii uu deegaanka u baahanyahay,
Maareynta Miisaaniyada Jamhuuriyadda Federaal Soomaaliyedd waxay ku dhisnaan doontaa cashuurta laga soo ururiyo degmooyinka dalka, iyadoo degmo weliba ay hoos imaaneyso maamulka Gobolkeeda Miisaaniyada waxaa lagu Jaangoonayaa baahida shacabka ku nool Gobolka .wax qabadka wasaaradaha lagu mataaneeyey Gobolka. Dawladda federaalka waxaa looga qoondeenayaa Gobolkiiba boqolkiiba 15% Dhakhliga laga soo ururiyo shacabka iyo ganacsatada soomaaliyeed ee gobolka waxaa dib loogu celinayaa Degmooyinka Gobolkaa boqolkiiba 50%.
Gobolada lagu mataaneeyey wasaradda oo aan dhakhliga ku filneyn , waxaa ka wakiil noqon doono : Wasiirka – Dawlaha Gobolka , Guddoomiyaha Gobolka (The Governor) iyo Duqa Gobolka (the Mayor) , Senatarada Gobolka iyo Xildhibaanda Degmooyinka ee Bobolkaaas ; waxay la xiriirayaa Guddiga Muwaanada ee Wasaaradda Maaliyada iyo Lacagta. Waa Guddi madax banana oo ka kooban 18 Qofooda oo ka kala socda Gobolada Federaalka ee dalka.
2.1 MATAANEYNTA KHEYRAADKA DALKA IYO WASAARADAHA DALKA
01. Gobolka Shabeelaha Dhexe ……………………….Wasaaradda Warshadaha
02. Gobolka Bay ……………………………… ….Wasarrada Qorshaynta Qaranka
03. Gobolka Bakool …………..Wasaardda Xanaanada Xoolaha Dhirta iyo daaqa
04. Gobolka Shebeelaha Hoose …………………………… .Wasaaradd Beeraha
05. Gobolka Hiiraan ………………………………… ……Wasaaradda Ganacsiga.
06. Gobolka Awdal ……………………… …….. Wasaaradda Arrinmaha Dibadda
07. Gobolka Waqooyi Galbeed ……… Wasaaradda Warfaafiinta & wacyi gelinta
08. Gobolka Benaadir ……………… . Wasaaradda Arrimaha Gudaha
09. Gobolka Gedo …………………………….. Wasaaradda dhalinyada & Sportiga
10. Gobolka Galgaduud …………………………Wasaaradaha Gaashaandhigga .
11. Gobolka Mudug …………………………Wasaarada Boostada iyo Isgaarsiinta
12. Gobolka Sool …………………………Wasaarada Dalxiiska iyo Deegaameynta
13. Gobolka Sanaag ………………………Wasaaradda Gaadiidka cirka iyo dhulka
14. Gobolka Toghdheer Wasaaradda Macdanta iyo Biyaha
15. Gobolka Bari ……………….. Wasaaradda Kallumeysa iyo kheyraadka badda
16. Gobolka Nugaal………………….Wasaaradda waxbarashada iyo barbaariinta
17. Gobolka Jubbada Hoose …………Wasaaradda Garsoore iyo Arrimaha Diinta
18. Gobolka Jubbada Dhexe ………….Wasaradda Hawlaha Guud iyo guryeynta
6. MAKAMADA DASTUURIGA EE DALKA (Legal )
Maxkamada Dastuuriga ee dalka waa hayad garsoor, waxayna qaabilsan tahay go’aan ka gaarista dastuurka dalka jamhuuriyada federaalka Soomaaliyeed, Tirada xubnaha ka mid noqon doono Maxkamada Datuuriga ee Jamhuuriyada Federaalka Soomaalia waxay noqonayaa 18 ruux oo aqoon u leh aqoonta Garsoorka, wxayna ka kala imaanayaa 18 Gobol ee uu dalka Soomaiya Ka kooban yahay. Waxyna kala dooran doonaan Guddoomiye iyo labo Guddoomiye ku xigeen, iyo Xoghaye Guud iyo xisaabiye. Shanta Gobol ee ugu horeyso ee laga soo dooranato waa kuwan hoos ku cad.
Gobolka Hiiraan Guddomiye
Gobolka Nugaal Guddoomiye Ku Xigeen
Gobolka Galdaduud " " "
Gobolka Bari Xoghayaha Guud
Gobolka Sh/dhexe Xisaabiayaha Guud
Gobolada Kale Xubin Joogta
Doorashada Guddoomiyaasha Gobolada
Nooca Federaalka ee ku haboon dalka Soomaaliya waa mid leh dastuur u fasaxayo Guddoomiyaasha Degmoominka in soo dooran d gudoomiyasha Goboladooda , Guddoomiyaasha Degmooyinka waxaa soo dooranayo Guddoomiyaasha tuulooyinka.Tusaale ahaan. 17 degmo ee gobolka Benaadir waxay si toos u magacaabayaan Wasiiru dawlahooda..
Benaadir Region B/dheere
A. Degmooyinka rasmiga ee laga soo dooranayo xildhibaanada Dalka
Dalka waxuu u baahan yahay Dastuur federaal ah. oo lagu caddeenayaa : Sidii loo wada wadaaga lahaa awooda dalka iyo kheyraadka dalka. Si, loo helo dastuurkaas, waxaa lagama maarmaan ah in laysla meel dhigo tirada rasmiga ah ee degmooyinka waxaa jirta saddex aragti oo kala duwan (89degmo,90 degmo , ama 91) degmo) Tirada rasmiga ah waxaa looga fadhiyaa marka sharci dejiyaasha soomaaliyeed ay cod geliyaaan.
Xildhibaanadu waa hey’adda sharci deginta ee dalka , isla-markaaba waa hey’adda keliya ee dalkan u horseedi karto hirgelinta qaabkii loo heli dastuur ku haboon Siyaasadda Federaalka Soomaaliya.
Haddii aan dooneyno in aan ka fekerno Aayada Caruurteyna iyo dhalinyaradeena ku kala nool dalka gudahiisa iyo dibadiisa Aniga waxaan aaminsanahay tiradada rasmiga ah ee degmooyinka dalka in ay yihiin 89 , degmo weliba waxaa laga rabaa saddex xildhiban , tusaale ahaan Degmada Bay, 3x 89= 267, kaba dhig 90×3= 270, ama 91×3=273.
Xildhibaanda Degmooyinka (councillors) waxay si too ula shaqeynayaan Degmooyinkooda; iyagoo soo darsayo baahida adeega guud ee degmadooda. Qaabkaas waxuu ka mid yahay talaabooyinka lagu doonayo in Soomlia ay hesho federal ku haboon oo u hayaama dariiqda wanaagsan ee dawladnimada
Dhabtii, xalka Soomaaliya waxuu ka bilaabanayaa Heya’ada Sharci Dejinta (Xildhibaanda labada Aqal.).aan sii qeexee, waa Aqalka Gobolada iyo Aqalka Degmooyinka. Xildhibaanda Aqalka Degmooyinka waxaa afka qalaad lagu yiraahda (Councillors) waxay had iyo jeer ku sugan yihiin Xaruumaha Degmooyinka laga soo doortay. Waxayna) wakiil ka yihiin danta guud ee shacabka ku nool degaankooda.(Degmadooda) Balse, Xildhibaanada Aqalka Gobolada ee loo yaqaan Senatarada (Senators ) Gobolada Dalka, waxay labada Gole shacab oo leh dastuur
xildhibaanada somaaliyeed waxay hawshooda u gudun doonaan sida xildhibaanada caalamka u shaqeeyo oo kale, waxay masuul ka yihiin shacabka ku nool degmooyinkooda. Laba daradle , waxayna si toos iyo si dadbanba ula shaqeyn doonaan guddoomiyaha Degmooyinka dalka, Xildhibaan welibana waxuu ka wakiil ka noqon doonaa shacabka ku nool Degmooyinka rasmiga ah ee dalka uu lahaa.
Madaxweynaha Federaalka waa inuu ku ekaadaa hab maamuuska xukuumada federaaka iyo raad raaca guddoonka sharuucda cusub ee looga gudbiyo siyaasadii qabiilka ku dhisneyd. Madaxweynaha federaalka waa in uu ka fekeraa mataaneynta hey’adaha Garsoorka ee dalka. Halka Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Federaalka soomaaliya.Waxuu bedelayaa jagadii Ra’iisal wasaraha waxuuna ma’suul ugu yahay xukuumadda ka kooban 18 wasiiru-dawlo oo ka masuul noqon doona shacabka ku nool 18 Gobol ee soomaaliya. madaxweyne ku xigeen waxuu ku shaqeyn doono siyaasadda la xiriirta fedraalka ee mataaneynta wasaaradaha dalka iyo gobolada.
Madaxweynaha Dawladda federaalka waxaa ka reeban in uu si toos ah u magacaabo Guddoomiyaasha Degmooyinka iyo kuwa Gobolada dalka.
Madaxweynaha federaalka lama soo dooranyo. Doorashadau waa wareegto. Waxaana lagu caddeyn doonaa shaxdan soo socoto ee ku qeexan magacyada Gobolada:
No. Gobolka dalka Magacyadooda No. Gobolada Dalka Magacyadooda
01 Awdal Madaxweyne
16 Waqooyi Galbeed Madaxweyne ku xigeen
Madaxweynaha koowaad waxuu ka imanaya Gobolka Koowaad ee Awdal, ku xigeenka Madaxweynaha waxaa laga soo dooranayaa Gobolka No.18. Xildhibaanda Aqalka Gobolada ee loo yaqaan Senatarada ayaa leh Hawlaha Doorashada Madaxweynaha.
Magacyadii madaxweyne ee astaanka u ahayd calanka Soomaaliyedd ayaaba micna beeshay, Taas macnaheedu waa kala danbayn la’aan ama isbarbar yaac abuuraysa qas iyo qaraabo kiil.